Weligaa ma hubisay warbixinnadaada Google Analytics kaliya inaad ka hesho tixraacyo aad u qariib ah oo ka soo baxaya warbixinnada? Waxaad aadeysaa boggooda mana jiraan wax lagaa sheegayo laakiin waxaa jira dalabyo kale oo halkaa ah. Qiyaas waxa Dadkaas waligood uma gudbin taraafikada bartaada.
Hadaadan ogaan sida Google Analytics shaqeeyey, asal ahaan pixel ayaa lagu darayaa bog kasta oo xamuul ah oo qabsada tan xog ah una diro mashiinka Google ee Analytics. Google Analytics ayaa markaa kala daadinaya xogta waxayna si habsami leh ugu abaabulaysaa warbixinnada aad fiirineyso. Meel sixir ah maleh!
Runtii waa wax xun maxaa yeelay waligood xitaa kamay bilaabin booqashada bartaada! Si kale haddii loo dhigo, ma jiraan wax macno ah oo loogu talagalay boggaaga inuu si dhab ah u xannibo. Waxaan ku wareegay oo ku wareejiyay tan aniga iyo martidayadii oo si dulqaad leh u sharraxay wixii ay qabanayeen in ka badan iyo in ka badan illaa ay ka soo mareen dhakadeyda qaro weyn. Waxaa loo yaqaan a gudbin cirfiid or gudbin cirfiid maadaama aysan waligood taaban goobtaada waqti kasta.
Daacadnimo dhan, wali ma hubo sababta Google uusan si fudud u bilaabin dayactirka keydka macluumaadka dadka wax diraya. Waa maxay muuqaalka weyn ee u noqon lahaa barnaamijkooda. Maaddaama aysan jirin booqasho dhab ah, nimankan khiyaameeyayaashu waxay ku kacayaan burburinta warbixinnadaada. Mid ka mid ah macaamiisheena gudbiyaha spam wuxuu ka kooban yahay in ka badan 13% dhammaan booqashooyinka boggooda!
Waxaa jira liistada la cusbooneysiiyey ee ku-dirista spam ee Github ee adeegsadayaasha Piwik ay adeegsanayaan waana wax fiican. Waxaan si toos ah u jiidayaa liiskaas oo aan si sax ah ugu qaabeynayaa qoraal ah OR bayaan kasta ka dib (waad nuqulan kartaa oo ku dhajin kartaa aagga qoraalka hoose ee Google Analytics):
Waxaad ku arki doontaa tan oo ah qoraallada serverka iyo fiilooyinka halkaas si aad isugu daydo oo aad uga horjoogsato spamers gudbinta bartaada. Ha ku mashquulin adeegsiga iyaga… xusuusnow in kuwani ayan ahayn booqashooyin dhab ah oo bartaada laga galo. Qoraallada ay dadkaasi adeegsanayaan waxay si toos ah uga been abuurtay GA pixel-ka server-kooda weligoodna xitaa kuuma iman!
Khudaar Duurjoog ah: Madal xubinnimo oo Dhammaan-Bixin ah